यो वर्ष पनि कमाईको मामिलामा सलमान टपमा, अरुले कति कमाए? – Rastriyapatrika
यो वर्ष पनि कमाईको मामिलामा सलमान टपमा, अरुले कति कमाए?
एजेन्सी । ‘सुल्तानलाई एकलेमात्र हराउन सक्छ, आफै सुल्तानले।’ सलमान खानले यो आफ्नो भनाई फेरि सावित गरेका छन् । भारतमा सबैभन्दा धेरै कमाउने सेलिब्रिटीजको फोब्र्स लिस्टमा उनी टपमा छन्।